Maalinta: Meey 15, 2018
Dhamaan wax soosaarka la taaban karo ee buundooyinka Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey Station ee Kağıthane Station ayaa la dhammeystiray gunaanadkii ugu dambeeyayna waa la daadiyay. Kabatas-Besiktas-Mecidiyekoy-Kagithane-Mahmutbey Howlaha mitirka waxay kusii socdaan xawaare buuxa halka khadku ku yaal saldhiga Kagithane [More ...]
Qorshaha Miisaaniyadda Gaadiidka Gaadiidka ee sannadlaha ah ee Bursa
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, 15 ayaa sanadkasta diyaarisay qorshe cusub oo Master ah oo loogu talagalay xalinta dhibaatooyinka gaadiidka, isagoo sharraxay inay u jeeddadu tahay inay lahaato gaadiid aan dhibaato lahayn 2035, ayuu yidhi. Madaxweyne Aktaş, Bursa [More ...]
Adeegga Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir
Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir, 21 bas oo ah inta lagu gudajiro bisha Ramadaan habeenki ilaa 02.30 si loo bixiyo adeega gaadiidka dadweynaha. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha waxay sii wadaysaa shaqadeeda adeeg gaadiid dadweyne oo ka sii habboon oo raaxo leh. [More ...]
Aaska aaska waxaa lagu qabtay Maareeyaha Saldhigga Karsha ee TCDD Metin Rusen Tutaz, kaasoo ku dhintay isbitaal uu ku daweynayey Izmit maalin ka hor. TCDD oo loogu talagalay aaska Maamulaha Tutaz [More ...]
HalkalıKadib dhammaystirka 80 ee xarumaha xaafadaha ee u dhaxeeya labada magaalo, imtixaanka ayaa lagu bilaabay xaafaddeeda xaafadda 3. Halkalı-Gebze inta u dhaxaysa khadadka qadiimka ah ee magaalada dayactirka ee qiyaastii kiiloomitir 77 [More ...]
Waxaa soo diyaariyey Hay'adda Iskaashiga Caalamiga ah ee Iswidhan (SIDA) iyo Xarunta Caalamiga ah ee Dimuqraadiyadda Maxalliga ah (ICLD); “Barnaamijka waxbarashada caalamiga ah: dimuqraadiyadda maxalliga ah iyo qaab guud oo la adeegsanayo iyada oo la adeegsanayo SymbioCity (horumar magaalo oo waara) [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, sida sanadkasta sanadkaan, "dhadhaminta guryaha" teendhooyinka iftar ayaa martigalin doona magaalada caasimada ah. Intii lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, oo ah meeshii mideynta, wadajirka iyo wadaagistu ay ka dhacday, barta '9 gooni gooni ah' ee Caasimadda [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay u beddelaysaa Salim Dervişoğlu Street, oo ku teedsan is-goyska bari-galbeed ee aag xeebeedka İzmit, oo u beddela waddo labo-jibaar ah. Wadada, oo hada loo isticmaalo hal haad wareega-socodka, waxay leedahay labo haad kadib shaqada. [More ...]
IZDENİZ waxa uu bilaabay in uu tijaabooyin ku maro qurxinta Gebiga
Markabka markabka, hadda waxay bilaabeen duulimaadyo tijaabo ah Güzelbahçe, Izçir Metropolitan District, Foça iyo Mordoğan. guri nagaadi, Karşıyaka iyo maraakiibta Alsancak ee la xiriira waxay shaqeyn doonaan kadib rukhsadda Wasaaradda. Magaalada weyn ee Izmir [More ...]
Agaasinka guud ee IETT wuxuu qabanqaabiyay munaasabad gaar ah oo loogu talagalay ”Maalinta Hooyada ee magaalada Tünel. Rakaabkii ku safrayay baabuurtii taariikheed ee Tunel ee u safray Karaköy-Beyo wherelu halkaas oo Ambiance Day hooyadeed lagu sii nooleeyay iyada oo ay jiraan waxyaabo qurux badan oo gacmahoodu wataan. IETT General [More ...]
RayHaber 15.05.2018 Warbixinta Shirka
Dhismaha Kontaroolka Dimuqraadiga ah, Korantada Qeybta Korantada Wagon ee Tamarta (TÜVASAŞ) Polatlı - Konya YHT Line Nadiifinta Kanaalka Dareenka Yenikapı - Awooda Khadka Mitirka Mitirka Mitirka ee Atat Metrork Kordhinta iyo Koronto-farsamada [More ...]
Qaab-dhismeedka taariikhiga ah ee Saldhigga Tareenka ee Alsancak, Kuliyadda Jaamacadda Yaşar ee Dhismaha Dhismaha Qaybta Architecture 3. Mashaariicda iyo moodellada ay ardaydu u diyaarsadeen maaddo ahaan looga soo qaatay shaqada guriga iyo muuqaalka ayaa lagusoo bandhigay Alsancak Station. Jaamacadda Yasar [More ...]
Mehmet Basoglu Wuxuu booqday naadiga Sivas Demirspor Club
Mehmet Başoğlu, oo dhowaan loo magacaabay Kuxigeenka Guud ee TÜDEMSAŞ, wuxuu booqday Sivas Demirspor Club, kaasoo firfircoon oo aan kala go 'lahayn tan iyo 1940. TUDEMSAS Guud [More ...]